TTSweet: အာလာပ သလ္လာပ ...
Posted by T T Sweet at 11:17 AM
Vista March 4, 2011 at 1:28 PM
eeek... တီဆွိတို့ ကတော့လုပ်တော့မယ်
မြစ်ရေကမှ စီးနေသေးတယ် မဆွိရေ အဲဒါကပိုသန့်နိုင်သေးတယ်။ မန္တလေးက လူတွေများဆို ဘယ်နှယ်လုပ်ပ တစ်မြို့လုံး ကျုံးရေသောက်ကြ တာလေ။ ကျုံးရေကရေသေလေ အဲဒီထဲမလဲလူလဲနစ်သေတာကြားဖူးတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့လဲ သူ့ဒေသနဲ့ သူတော့လဲဟုတ်လို့ပါ ရောဂါပြီးနေကြပြီလေ။ ရန်ကုန်တို့ ဘာတို့ကသွားတဲ့လူတွေသောက်မိရင်တော့ ၀မ်းလျှောတာတို့ဘာတို့ဖြစ်တတ် ကြတယ်။ သောက်နေကျ အလေ့အကျင့်မှမရှိဘဲကိုး။
ခုတစ်လော ရေးနေတာတွေက နည်းနည်း နည်းပညာတွေ များနေလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလာဘ သလာဘလေးပေါ့။
အာလာပ သလ္လာပ ပါ ခင်ဗျာ။ (မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း၊ မြန်မာစာအဖွဲ့)
(http://myanmarwords.pikay.org/2008/12/ah.html#ah1 ဒီမှာ အောက် “လ” ကျန်နေတယ်။)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 4, 2011 at 3:56 PM
ညီမတို့လည်း ငယ်ငယ်က ချောင်းရေကိုဘဲ သောက်လာတာ
ခုကြီးလာတော့ အိမ်ပြန်တဲ့ခါ ရေတွင်းရေကိုတောင် ဒီတိုင်းသောက်ရတာ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်သလို ခံစားရတယ်
လူတွေဟာ များများသိလေ များများကြောက်လေ ဆိုတာ မှန်တယ် ငယ်တုန်းကလို ဘာမှ မသိတဲ့အချိန်မှာ ဘာကိုမှ ကြောက်ရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။
သမီးလေးက ချစ်စရာကောင်းတာမို့ မြင်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။
Pwint Myue Zin March 4, 2011 at 5:13 PM
ငယ်ငယ်ကတည်းက ရေစိမ်းသောက်လာတာ အကျင့်ပါနေပြီ.. သင်္ဘောကျင်းမှာလုပ်မှပဲ ရေနွေးသောက်နေရတယ်.. ရေကသန့်ပေမယ့် သွယ်တဲ့ပိုက်က မသန့်တော့ သံရောင်ထနေလို့လေ..း)
ကျောက်လာပ March 4, 2011 at 5:34 PM
သဲပြင်ကို တတောင်လောက်တူးလိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ natural spring water ကတော့ သောက်လို့အင်မတန်ကောင်း...လွမ်းမိပါသေး..
စာရေးဆရာ..ဘလော့ဂါတွေရဲ့ privacy နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် ဗမာပြည်မှာက များသောအားဖြင့် ရုပ်ရှင်၊ဂီတက ပုဂ္ဂိုလ် တွေလို စာရေးဆရာတွေကို မမြင်ဖူးကြတာများတယ်..ဒါ့ကြောင့် တချို့ နာမည်ကြီး ဆရာတွေ အယောင်ဆောင်ပြီး မိန်းကလေးတွေကို ဖျားယောင်းကြတာတွေ..ငွေလိမ်သွားတာတွေ မကြာမကြာ ကြားဖူးတယ်..ဒါ့ကြောင့် ကိုကြီးကျောက်က ကိုယ် အဖိုးကြီး ဆိုတာ သိအောင် ဓါတ်ပုံတင်တာ..တချို့ က online မှာ မမြင်ဖူးကြပဲ တယောက်နဲ့တယောက် အီစီကလီတွေလုပ် ၊ပြီးမှ တလွဲတွေ ဖြစ်နေတော့ ပြဿနာတွေ တက်ကြတွေကလဲ ကြားနေရတယ်.. အမျိုးသမီးတွေ..နိုင်ငံရေးတွေ ရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ..ကိုယ့်ကို လူသိမှာစိုးလို့ ဓါတ်ပုံမတင်ချင်တာ မပြောလိုပါဘူး..ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြူရောင်နတ်သမီး သူ့ဓါတ်ပုံတွေတင်စက နှမချင်းမစာမနာ စော်စော်ကားကားတွေ အရေးခံရဖူးတယ်..ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ့်လမ်းကို ဆက်လျှောက်တော့လဲ အေးဆေးပဲပေါ့..လက်ခံယူသူမရှိရင် ပေးသူက သူ့ပစ္စည်း သူပြန်ယူရတာပါပဲ.. ကိုကြီးကျောက်ကတော့ ကိုယ်မဟုတ်တာမလုပ်ရင် လူပုံအလည် မျက်နှာပြရဲပါတယ်..
rose March 4, 2011 at 8:41 PM
တီဆွိရဲ့ အာလာပ သလ္လာပ လာဖတ် ပါတယ်။ အဲတော့... မြစ်ရေတွေ အဲ့လို သောက်ကြတယ်လား။ ရို့စ်တော့ ရန်ကုန်သူ ဆိုတော့ အ၀ီဇီတွင်း ရေကို ရေစစ်နဲ့ စစ်ပြီး သောက်နေကျ ဆိုတော့ အဲ့ဒါတွေ မသိဘူးတော့။ ဂျုးဂျုးလေး သီချင်း ဆိုပြီး ကနေတာ ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။ ဒီ ဗွီဒီယို ထဲမှာ ဂျုးဂျုး တော်တော် ငယ်သေးတယ်နော်း) ပြောင်းရွှေ့တာ အစစ အဆင်ပြေပါစေ တီဆွီရေ...။ ရို့စ်ဆီလည်း လာလည်လေ..။ ပီားး။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! March 4, 2011 at 11:38 PM
အာလာပ သလ္လာပ လာဖတ်တာပါမမ။ ညီမလေးလဲ ရန်ကုန်သူဆိုတော့
အဝီဇီတွင်းရေကိုရေစစ်နဲ့စစ်ပြိးသောက်ခဲ့တာပါ အဟီး။ ချစ်စရာဂျူးဂျူး
ဖိုးတုတ် March 5, 2011 at 1:55 AM
ဖိုးတုတ် March 5, 2011 at 3:29 AM
မဆွိ သမီးက အဆိုကောင်း အကကောင်းဗျ ကလေးကိုပဲ မမြှောက်ပေးနဲ.လေ မဆွိရော ဦးခြိမ့်ပါ ၀င်ပြီးကသင့်တယ် ဂျူးဂျူးကိုင်ထားတဲ့ဘီးက အန်တီကွန်း လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ ပေါ-ချောင်-ကောင်း ဘီးလား
ဒီမှာဆရာတစ်ယောက်ပြောတာမှတ်မိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်က စလုံးမှာ အုန်းနို.ညစ်တာ စက်နဲ.မဟုတ်ပဲ အုန်းဂျစ်နဲ.ချစ်ပြီး ပိတ်စထဲကိုထည့်ပြီး လက်နှင့်ညှစ်ရတယ် လို.ပြောဖူးပါတယ် အုန်းနို.ညှစ်ရောင်းတဲ့ အန်ကယ်ကြီးက toilet ကအပြန်မှာ လက်ကိုသေသေချာချာမဆေးပဲ အုန်းနို.ညှစ်တဲ့အခါ additional flavor တွေ ထဲ့ပြီးသားလို. ပြောတာကို ရယ်မိပါတယ် ၊
အမှန်တော့ ရေကို မကျိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ ရေစစ်နဲ. စစ်ပြီးသောက်သင့်တယ် ၊ စလုံးကသန်.တယ်လို. နာမည်ကြီးပေမဲ့လည်း အစားအသောက်ထဲမှာ ခဲပါတာတို. ဆံပင်ပါတာလည်းကြုံဖူးပါတယ် ၊ သိပ်ပြီးတွေးနေရင်လဲ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် breakfast, lunch, dinner အစအဆုံး ချက်စားရမလိုဖြစ်နေတယ် သဲပါ ဆံပင်ပါတဲ့ ဆိုင်ကို ရှောင်လည်းခဏပါပဲ ၊ ပြီးတော့လည်း အဲဒီ့ နေရာမှာပဲပြန်စားရတာတော့တာပဲ ၊
နောက်ဆုံးတော့ ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလူသားတွေနေပြီး အညစ်အကျေးပေါင်းစုံတွေကို ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာပဲ စွန်.ချနေကြတယ် တစ်ခြား planet မှာ သွားပြီးစွန်.ပစ်နိုင်တာ မဟုတ်လေတော့ အရာရာတိုင်းဟာ သိပ်ပြီးတော့လဲ သန်.တယ်လို.မထင်မိပါဖူး
အရင်ကဆောင်းပါးတစ်ခုမှာဖတ်ဖူးတာ ရေကိုကျိုချက်တာ မကောင်းဖူး ၊ သဘာဝအတိုင်းသာသောက်သင့်တယ်လို. ရေးထားတာဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ ဒီမှာ ဆက်စပ်တာနဲ. သုတေသီတွေရဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ လေ့လာတွေ.ရှိချက်တွေ မတူတာတွေကိုရေးချင်ပါတယ် ၊ အရက်သောက်တာ မကောင်းဖူးဆိုပေမဲ့လည်း ၀ိုင် ၊ ၀ီစကီကို moderate သောက်ရင်ကောင်းတယ်လို. ဆိုသူကဆို ၊ တကယ်တော့ အရက်ဆိုတာကလည်း တောအရက်က အသည်းကို မြန်မြန် ထိုခိုက်ပြီး အရက်ကောင်း Black/green/Blue/double black label ကတော့ အသည်းကို ဖြေးဖြေးချင်း ထိခိုက်တာပဲ မဟုတ်လား ၊ ကော်ဖီသောက်တာ မကောင်းဖူးလို. သုတေသီ တစ်ယောက်ကပြော ၊ နောက်တစ်ယောက်က ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းတယ်လို. ပြော ၊ ဘာတွေမှန်းကို မသိတော့ဖူး ၊ hand phone သုံးတာ radiation က လူ့ ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိတယ်လို.ပြော ၊ နောက်တစ်ယောက်က Alzheimer disease (dementia) ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်တယ် လို.ပြောကြပါတယ် ၊ စလုံးမှာ ကလေးငယ်တွေဆို ရင်ကျပ်ချောင်းဆိုးရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန် မြန်မာပြည်က တစ်ချို.ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးတွေ ဒီလိုပဲဖြစ်သလိုနေပြီး စလုံးက ကလေးတွေလောက် ရင်ကျပ်ရောဂါရှိတယ်လို.လည်း မတွေ. မိပါ ၊ သိပ်အသန်.လွန်ရင်လည်း နေရာတကာမှာ မကောင်းဖူးလို. ထင်မိပါတယ် ၊
Shinlay March 5, 2011 at 3:51 AM
ရေ အကြောင်းဖတ်ပြီးငယ်ဘ၀ သတိရသွားတယ်။
မယ့်ကိုး March 5, 2011 at 6:50 PM
မမက ချောပါတယ်း) ရှက်လို့ မတင်တာ ဟုတ် :)
AMK March 6, 2011 at 4:22 PM
ဂျူးဂျူးလေး သီချင်းဆိုတဲ့ ပုံ က မိုက်တယ်နော်
မောင်လူအေး March 7, 2011 at 5:18 AM
ဂျူးဂျူးလေးသီချင်းဆိုတာတော်တော်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်..အနောက်က ဟာမိုနီလိုက်ပေးတဲ့ အန်တီဆွိ အသံကလဲ ကောင်းတယ်ဗျ...ငယ်ငယ်ကကျောင်းမှာ ပင်တိုင်အဆိုရှင်လားမသိ..ဟိ
တီဆွိဖြစ်ဖြစ် ဦးခြိမ့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့...လူအေးလည်း သြစီအကြောင်းဗဟုသုတ ရချင်လို့ပါ.. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်..
ကိုဇော် March 8, 2011 at 1:34 AM
ကလေးကတော့ ကလေးလိုပဲ တကယ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိတယ်။
သိတာတွေ များလာလေလေ လူက ချုပ်တည်း ခံရတာတွေ များလာလေလေ လိုပါပဲ။
စစ်ကိုင်းတမြို့လုံးနီပါးကအဲ့ဒီမြစ်ရေကိုတကူးတကဝယ်သောက်နေကြတာလေ အန်တီဆွိရဲ့။ အဲဒိမြစ်ရေချိုချိုကြောင့်စစ်ကိုင်းက ကျွန်တော့်ကြီဒေါဆိုရင်ခု ၈၅ နစ်လောက်ရှိ့ပြီ။ အံ့သြစရာကောင်လောက်အောင်ဘာရောဂါမှမဖြစ်ဘူး။စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတခုလုံးကချောင်တွေ ဘုန်းဘုန်းတွေ ဆရာကြီးဆရာလေးတွေ လဲဒီမြစ်ရေနဲ့တရားဓမတွေကြင့်ကြံနေကြတာလေ။ ကဲဘာပြောမလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့စစ်ကိုင်းရောက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ immune system ကိုစမ်းတာခုချိန်ထိအောင်မြင်နေတုန်းဘဲ။ ဟဲဟဲဟဲ